Zidane: “Xirfadyahan ahaan waa mid ka mid maalmihii iigu fiicnaa” – Radio Damal
Zidane: “Xirfadyahan ahaan waa mid ka mid maalmihii iigu fiicnaa”
Zinedine Zidane ayaa sheegay in ku guuleysiga horyaalkii ugu horreeyay ‘La Liga’ ee uu la qaaday Real Madrid muddo seddex sano ah, uu uga farxad badan yahay ku guulaysiga Horyaalka Yurub ee Champions League.
Real ayaa ku guuleysatay horyaakani iyada oo ciyaar u harsan tahay kaddib markii ay Villarreal kaga soo badisay garoonkeeda Alfredo Di Stefano.
Karim Benzema ayaa laba gool oo midi rikoodhe yahay ku hoggaamiyey kooxdiisa, halka Villarreal ay hal gool keliya dhalisay.
Kooxdan uu hoggaamiyo macallin Zidane ayaa ku guuleysatay dhammaan 10kii kulan ee ay ciyaareen tan iyo markii kubada cagta Spain dib loo bilaabay bishii June.
Waxayna ku aaddan yihiin ciyaartii u danbeysay ee horyaalka xilli iyaga oo toddoba dhibcood oo nadiifa ka horreeya kooxda ay xafiiltamaan ee Barcelona, oo iyadu kaalinta labaad ku jirta.
“Tani wax walba way ka wanaagsan tahay. Waxay nagu qaadatay dedaal badan inaan ku guulaysanno La Liga” ayuu yidhi macallinka Real Madrid.
“Kaddib 38 ciyaarood, waxaannu haysannaa dhibco ka badan qof kasta. Kaddib bandawgii iyo wax kasta oo dhacay. Tani waa arrin farxad leh” ayuu ku sii daray hadalkiisa.
Garoon albaabbadu u xidhan yihiin oo qaada 6,000 kursi oo ah xerada tababarka, ayaa laga yaabaa inaysan Real aysan macno weyn u samayn inay ku dhex hantaan horyaalkoodii ugu horreysay tan iyo 2017. Maddaama uu dayactir ku socdo garoonkii weynaa ee kooxda.
Laakiin taasi kama hor istaagin in kooxda Zidane ay si weyn ula dabbaal degaan guushan ay gaadheen.
“Maanta waa mid ka mid ah maalmihii iigu fiicnaa aniga oo ah xirfadle ah. Ka dib wax walba oo dhacay, seddexdii bilood ee nasashada, waa wax cajiib ah guusha aannu gaadhnay.” ayuu idhi Zidane
Horyaalka La Liga ayaa ku yaraa, marka loo eego halkii ay kaga jiraan guulaha Champions League ee Real ay gaadhay 10kii sano ee lasoo dhaafay, waana markii seddexaad oo kaliya sagaalkii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay ee ay qaadeen koobkan.
Zinedine Zidane ayaa sanad iyo badhkii ugu horreeyay ee uu tababaraha u ahaa kooxdaasi Real Madrid, waxa uu la qaaday horyaalka La Liga, koobka Horyaallada Yurub, waxaana uu gaaray fiinaal kale oo Horyaalllada Yurub ah.
Gabagabadii, guuldarradii Barcelona ee Osasuna gaadhsiisay ayaa guushan ka dhigtay mid yar oo raaxo badan.
Hadafka Zidane ayaa hadda u weecan doona dhanka kooxda ay isku hayaan Champions League ee Manchester City. Kooxda heysata horyaalka La Liga ayaa u safreysa Etihad Stadium 7da Ogosto iyagoo lugta hore kaga sii adkaaday 2-1
“Champions League waa Champions League laakiin La Liga ayaa iga dhigeya mid farxad badan, sababtoo ah La Liga waa halka aannu wax ku nahay” ayuu yidhi Zidane.
“Tani waa dareen weyn maxaa yeelay waxa ay ciyaartoydani waxay sameeyeen wax cajiiba. Dareenkayga ayaa kacsan oo dhab ahaantii ereyo aan ku qeexo ma garanayo”
Ra’isal wasaaraha Spain, Pedro Sanchez, ayaa bilawgii bishii Juun sheegay in tartanka horyaalka kubadda cagta La Liga ee dalkaasi dib u furmi doono laga bilaabo 8 Juun hase yeeshee aan taageerayaasha loo ogolaan doonin in ay garoonnada tagaan, kaddib muddo uu u hakisnaa faafitaanka Coronavirus.
Real Madrid, ayaa horyaalkani uga dhigan yahay koodii 34aad, iyagoo ka sarreeya siddeed horyaal kooxda Barcelona.